Konke mayelana neGPS nemishini - iGeofumadas
Konke mayelana GPS kanye nemishini
Leli khasi liyisifinyezo esibuhlungu sezihloko ezifakwe kuleli sayithi mayelana ne-GPS neMishini. Ayinazo izibuyekezo zakamuva.
Uma ungakutholi obukufuna, ungabheka okwakamuva okunikezwe izigaba noma amathegi alandelayo:
GPS / Izinsiza kusebenza
Buyela ku-General Index
GPS Mapper Hambayo, Promark nabanye
MobileMapper Field izindaba MobileMapper Office
I-Manual of MobileMapper ne-Promark ngesi-Spanish
I-Map Map 10, ukuqala kokuqala
Bheka i-100 Mobile Mapper
Ihlola izithombe ze-Promark3 ... nje
Inguqulo Umehluko MobileMapper Office futhi MobileMapper Office 6
I-GPS Promark 3, umbono wokuqala
I-GPS Yomakhalekhukhwini Map 6, ukuthunyelwa kwemininingwane kwedatha
I-GPS Yomakhalekhukhwini Map 6, Thatha idatha
I-Google Amamephu kusukela ku-Map Map 6
Lapho ukuthenga i-GPS
I-MobileMapper 6, ukuqala kokuqala
Ithebula lokuqhathanisa le-60 Isitoreji Sonke
I-MobileMapper 6 vrs. Juno SC
Dala ama-contour ne-Civil CAD kusuka ku-Total Station idatha
Inkambo yokudweba ngesiteshi esiphelele
Amanothi okusetshenziswa kwe-GPS ne-Leica esiteshini esiphelele
Ingabe sithatha isiteshi esiphezulu se-robotic?
Ukuhlola Isiteshi Esiphezulu Sokkia SET 630RK
Ama-manuals kanye nezifundo
Ukunciphisa kuthenga i-Ashtech; yini esingayilindela
Ukukhangiswa kwamakhulu we-Geo
Ukucushwa kwedatha nge-software ye-CAD / SIG
GPS Babel, engcono usebenze idatha
Yenza okungahambisani ne-ArcGIS
I-TopoCAD, ngaphezu kwe-Topo, engaphezulu kwe-CAD
Ukusetshenziswa nezinhlelo zokusebenza
I-Municipal Cadastre, iyiphi indlela elula
Dweba ku-intanethi ku-Google Maps
Lungisa idatha ngokusekelwe kohlolo olunembile kakhulu
Ukwabiwa kwemishini yokuhlola
I-GPS kwimishini yeselula
XPERIA mini X10, kuqala ukuhlangana ne-Android
I-GPS ubukhulu bezinkinobho zokukhiya nezinombolo zomhlaba wonke
Ukufaka i-gvSIG Mobile
Amamephu we-GPS eVenezuela, ePeru, eColombia naseMelika Ephakathi
GPS Gaia, ukuthatha GPS, Ipad nemizila yeselula
Ezinye izihloko ezisho i-GPS nemishini
Amamagazini we-3, i-10 Agasti i-geofumed novelties
Okuhamba phambili kwe-Zonum ngoba CAD / GIS
I-2 Geofumadas ngezindiza nezixhumanisi ze-6
I-6 Geoinformatics, iningi labahloli
Indaba efanayo, manje ene-GPS
13 Iphendula "Konke mayelana neGPS nemishini"
NgoFebhuwari, i-2018 ku
Ngiyaqonda isimo sakho, lapho sendawo imagebhugebhu kakhulu empeleni kwenzeka kulesi simo ungakhululekile, okushoyo kungcono isikwele kanye Beka amakhora at vertex ngamunye, kufanele sibheke ezinye izici sezwe ukunikeza umbono, kepha ngiyakuninika iphuzu yami umbono ukuze ubone uma kukhona isiza, omunye amakhora endaweni ephakeme kakhulu endaweni ethile e kungenzeka phakathi bekukuncane, kusukela 20 km ibangana a imishini GNSS bese wengeza ukuphinda osendaweni ezindaweni eziphakeme kunazo zonke bezama ukucoshela ezindaweni lapho kungekho Ukusabalala. Ukusizakala nalokho osunakho kakade, kungaba kuhle ukwazi ukuthi ngengozi ngeselula akhawunti e-Inthanethi kwezinye izindawo, mhlawumbe ungakwazi nokuqalisa NTRIP + RADIO inhlanganisela. Noma ngikushiya mail yami, info@acnovo.com
babe endaweni silinganisiwe 30000 amahektha ukwakha isikwele ka 20000 m 15000 m ohlangothini ngayinye, ngesikhathi vertices babe ERP NET R9 Trimble (ERP, Permanent Tracking Station) futhi kusho 1 ERP, nesimo sendawo sangaphakathi isikwele imagebhugebhu (ngokwanele amagquma), kulesi simo kwenza GPS ukusebenza rover RTK isignali R10 Trimble kulahleka, kucatshangwa ukubeka uphawu GPS radio repeater. embuzweni okuyinto uxhumano engcono RTK Surveying, uxhumano omsakazo uchungechunge noma ngokulinganisa.
NgoSeptemba, i-2017 ku
Sawubona! Ngizame ukubeka isithombe semvelaphi ye-georeferenced kumqoqo we-Topcon GR5 GPS futhi angikwazi ukukubona ngeso lengqondo. Yini okufanele ngiyenze?
NgoJulayi, i-2016 ku
Sawubona wonke umuntu, ngine-GPS ye-ashtech 120 Nganginamathele esikrinini se-spectra ekuqaleni kukhona enye indlela yokuyibuyisela kabusha noma ukuyilungisa
NgoJuni, i-2014 ku
Okthoba, i-2013 ku
Sawubona, ngidinga ukwazi ukuthi ngingakwenza kanjani noma isixazululo salenkinga encane enkulu.
Ngine-GPSMAP 62 SC. Ngenze inhlolokhono ngamaphuzu nezithombe zamanye amabhuloho namathrekhi wesitimela futhi manje angikwazi ukulanda izithombe noma yini, ngingenza kanjani noma yiluphi uhlelo engingalusebenzisa kulokhu, izithombe zinokuxhumanisa nazo aziveli ukuphuma zizokwazi ukuzithatha ku-google eart uma kunjalo nginethemba lokuthi uzongisiza ngibonge kakhulu.
NgoSeptemba, i-2013 ku
lei emhlabeni umuntu othi ukuthi .sp3 (esfemeris eqondile) amafayela angadluliselwa Rinex travez BERNESE sofware. Umbuzo kungenzeka? futhi uma kunokwenzeka kusuka lapho ngilanda khona isofthiwe. Ngifake ikhasi lakho lokhu yisixhumanisi:
http://www.bernese.unibe.ch/ Kodwa angizange ngithole i-installer. Omunye angangisiza ngicacise ukuthi lokhu kungenzeka noma cha. - DE AHEAD HAND THANKS TO ALL.
UGuillermo Correa Arias uthi:
Agasti, i-2013 ku
NgoJulayi, i-2012 ku
Sawubona Diego, Angazi ngokwanele mayelana ne-EPOCH ukukunikeza iseluleko.
Fausto, hlola usuku ikhompyutha yakho nekhompyutha yakho. Akufanele ngikunikeze izinkinga. Ngabe usebenzisa yiphi i-software?
NgoJuni, i-2012 ku
Ngidinga ukwazi ukuthi kwenzekani nge-software ye-MSTAR ye-software ye-Magellan Promark X ukuthi kuze kube yimanje ayikwazanga ukuyisebenzisa, inginika iphutha ezinsukwini zekhalenda okwamanje esebenzisa le software ukuze ngikwazi ukuchaza ukuthi kwenzekani ngidinga usizo.
NgoMashi, i-2012 ku
Ngingathanda ukuba nombono mayelana ne-GPS L1 EPOCH 10 yezinhlolovo ze-topographic ngokucacile kahle futhi kuqhathaniswa ne-Mobile Mapper 10. Ngiyabonga
NgoFebhuwari, i-2012 ku
Bangamaqembu amahle kakhulu, kanye nokubi ongakutholi njalo ukusekelwa kwakho lapho ulimala. Kuya ngedolobha lapho uhlala khona, kepha ngokuvamile eLatin America banesikhundla esiphansi maqondana neSokkia, Leica neTopcon
Sawubona sithandwa, ngivela e-Argentina futhi bengifuna ukwazi ukuthi yimiphi imibono i-stonex nemikhiqizo yaseningizimu efanele iziteshi eziphelele. Lapha aziwa kakhulu, ngakho-ke ngithanda ukwazi, uma bezizamile, ukuthi zabanikeza miphi imiphumela… kuyathakazelisa ukuba nombono womuntu osevele unolwazi lokusebenza nale mikhiqizo.
I-Google Earth yisoftware eza nokuguqula indlela esibona ngayo umhlaba. Okuhlangenwe nakho kokuzungezile ...